खाना खानेबित्तिकै पेट दुख्छ ? सावधान हुनसक्छ यस्तो गम्भीर समस्या – Jagaran Nepal
खाना खानेबित्तिकै पेट दुख्छ ? सावधान हुनसक्छ यस्तो गम्भीर समस्या
त्यसैले पेट दुख्नुलाई धेरैले सामान्य रुपमै लिने गरेको पाइन्छ। तर, कहिलेकाहीँ पेट दुख्ने समस्याबारे हेलचेक्र्याँइ गर्दा पेटमा अल्सर वा क्यान्सर भएर पेटभित्रका कुनै अंग शल्यक्रिया गरेर फ्याल्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। पेटको दुखाइ जटिल रोगको संकेत पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। पेट दुख्नुका धेरै कारण हुन्छन्। कसैकसैमा पेटकै रोगका कारण पेट दुखेको हुन सक्छ भने केहीमा खानपिनमा हुने गडबडीका कारण पेट दुख्छ।